XOG: Muxuu ka yiri Wasiir Cawad qaraxii Boosaaso ee lagu eedeeyay Qadar & Su’aallo laga waydiiyay… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Muxuu ka yiri Wasiir Cawad qaraxii Boosaaso ee lagu eedeeyay Qadar...
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa su’aalo weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Axmed Ciise Cawad.
Guddigan oo guddoomiye u yahay xildhibaan Cabdiqaadir Cali Cosoble ayaa wasiirka wax ka weydiiyay howlaha wasaaradda gaar ahaan warbixin dhawaan uu qoray wargeyska New York Times, kaasoo dowladda Qadar ku eedeeyay in ay ku lug leedahay qaraxyada ka dhaca Soomaaliya.
Wasiir Cawad ayaa gaashaanka u daruuray warka uu baahiyay wargeyska oo sheegay in Qadar ay masuul ka ahayd qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso.
Wasiirka ayaa sheegay in kulamo ay wada yeesheen diblomaasiyiin labada dal kala socota kaddib dowladda Qadar ay iska fogeysay ku lug lahaanshaha dhacdadii Boosaaso iyo kuwa kale ee la midka ahba.
Guddiga ayaa wasiirka ka dalbaday in xukuumaddu baaritaan buuxa ku sameeyso arrintan kaddibna natiijada lala soo wadaago golaha shacabka si ay go’aan uga gaaraan.
Dhawaan ayay ahayd markii wargeyska New York Times oo soo xiganaya codad lasoo dusiyay oo dhex maray danjiraha Qadar ee Soomaaliya iyo nin ganacsade ah oo u dhashay dalkaas Qadar oo sheegaya in ay iyagu ka dambeeyeen weerarkii Boosaaso.
Markii ay wararkan soo baxeen dowladda Qadar ayaa dhankeeda soo saartay qoraal ay ku sheegtay in Qadar had iyo jeer ay u taagantahay taageerada nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya, cid walba oo arrinkaa ka hor imaatana aanay matalin Qadar.